युक्रेनी राष्ट्रपति लुकेको बंकरमा रुसी हमला, के छ जेलेन्स्कीको अवस्था ? — Imandarmedia.com
युक्रेनी राष्ट्रपति लुकेको बंकरमा रुसी हमला, के छ जेलेन्स्कीको अवस्था ?
मस्को। रुसले युक्रेनमाथिको सैन्य कारवाही दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की लुकेर बसेको बंकरमा रुसी सेनाले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। यो घटना बाहिरीए पछि अमेरिका र नेटो देशहरुमा रडाको मचिएको छ।
जेलेन्स्की बसेको बंकरको छेउमै रुसी सेनाले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको हो। युक्रेनी सेनाको अड्डामा गरिएको उक्त हमलाबाट ठूलो क्षति अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले बताएका छन्। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीबारे पनि नामितो अड्कलबाजी भएको छ।
रुसी सेनाले जेलेन्स्की लुकेर बसेको बंकर पनि पत्ता लगाइसकेको बताइएको छ। राष्ट्रपति जेलेन्सकी बंकरमा कडा सुरक्षा घेरामा लुकेर बसेका छन् । त्यहीबाट उनले भिडियो बनाउँदै सार्वजनिक गरिरहेका छन्।
राजधानी किभ पुग्ने विदेशी नेताहरुसँग भेट्ने भन्दा जेलेन्स्की लुक्ने बंकर अलग भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमहरुले बताएका छन्। तर रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमण पछि जेलेन्स्कीको अबस्थ अज्ञात रहेको छ।
जेलेन्स्कीको सुरक्षामा युक्रेनी सेनाको दुई तीन बिग्रेड नै तैनाथ गरिएको छ। एन्टीएयर क्रप्ट सिस्टमसहित एन्टी मिसाइल सिस्टम पनि जेलेन्स्कीको सुरक्षामा बंकरमा जडान गरिएएको बताइएको छ।
राजधानी किभमा पहिले भन्दा हमला तेज भएपनि रुसले अन्य शहरलाई पहिला कब्जा गर्ने योजना बनाएको बताइएको छ। राजधानी किभको सबैभन्दा नजिक रहेको इरपिन सहरमा पनि रुसी सैनिकले हमला गरिररहेका छन्।
यो शहर पनि करिब करिब रुसी सेनाको नियन्त्रणमा आइसकेको छ। केही ठाउँमा सानो संख्यामा रहेका युक्रेनी सेना फाटफुट प्रतिरोध गरिरहेका छन्।रुसी रक्षामन्त्रालयले आफूले पूर्वी युक्रेनलाई मुक्त गर्न चाहेको बताएको छ।
उसले अलग राज्य घोषणा गरेका क्षेत्रलाई युक्रेनबाट अलग गराउन लागेको बताएको छ। यसैबीच मारियोपोलमा रुसी सेनामाथि फाइरिङ गरिरहेको सैन्य जत्था विदेशी नागरिक भएको रुसी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
विदेशी नागरिक भएकाले युक्रेनी जनताको ज्यानसँग कुनै सरोकार नभएको बताइएको छ ।युक्रेनी सेनाले आत्मसमर्पण गरेर ठूलो क्षेति हुनलाई रोकेपनि विदेशी सेनाले नमानेको रुसले जनाएको छ।
रुसले नेटो र अमेरिकाले लडाइँलाई लम्ब्याउन हतियार दिइरहेको बताएको छ। आन्तरिक दुर्घटनाका कारण सोभियतकालिन युद्धपोत डुबेकोमा युक्रेनले खुशीयाली मनाइरहेको बेला रुसले एकै पटक पाँचवटा युद्धपोत समुन्द्रमा उतारेको छ।
रुसको मस्क्वा जहाज आन्तरिक दुर्घटनापछि आगलागी भएर डुबेको थियो। भरखरै रुसी सेनाले युक्रेनकी क्रिमिन सहर नियन्त्रणमा लिएको छ। रुसी सेनाले निर्णय हमला गरेसँगै यो शहर पूर्णरुपमा रुसले नियन्त्रणमा लिएको हो।
रुसले औपचारिक रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका र अरू साझेदार देशहरूलाई युक्रेनलाई हतियार उपलब्ध नगराउन चेतावनी दिएको छ।उक्त चेतावनी मस्कोले एउटा कूटनीतिक नोटको माध्यमबाट दिएको छ जसको प्रतिलिपिलाई अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले परीक्षण गरेका छन्।
दुई पृष्ठको कूटनीतिक नोट अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई रुसको वासिङ्टन डिसीस्थित दूतावासले उपलब्ध गराएको थियो। त्यसमा अमेरिका र नेटोलाई हतियार सहयोगले युक्रेनको द्वन्द्व थप चर्काइरहेको र त्यसले भविष्यवाणी गर्न नसकिने परिणाम“ निम्त्याउन सक्ने बताइएको छ।
युक्रेनलाई अमेरिकाले नयाँ सैन्य सहयोगको प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी गरेको विवरण बिहीवार बाहिर आउन थालेपछि उक्त नोट पठाइएको थियो।त्यसको केही घण्टापछि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनले आठ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सैन्य सहयोगलाई अनुमोदन गरेका थिए जसमा पहिलो पटक लामो दूरीमा पनि निशाना लगाउनसक्ने होविटजर्सजस्ता हतियार थिए।
पछिल्लो सैन्य सहायताको प्याकेजमा हतियारहरू, ड्रोन, बख्तरबन्द गाडीहरू र हेलिकोप्टरहरू पनि छन्।त्यसलाई युक्रेनको सामर्थ्यलाई त्यहाँ देखिएका रुसी सैन्य क्षमतासँग बराबरी गर्ने कदमका रूपमा लिइएको थियो। एक जना वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गरिए अनुसार उक्त चेतावनीलाई अमेरिका र नेटोद्वारा युक्रेनमा उपलब्ध गराइएको सैन्य सहयोग प्रभावकारी बनिरहेको मस्कोको चिन्ताका रूपमा हेरिनुपर्छ।
अमेरिकाले उपलब्ध गराउने भनेको सैन्य सहयोगको पहिलो किस्ता केही दिनपछि युक्रेन पुग्नेछ।रुसले हाल युक्रेनको पूर्वी भेगमा आफ्नो कारबाहीलाई केन्द्रित गरेको छ र केही दिन डोनबास क्षेत्रमा लडाइँ चर्कने ठानिएको छ। युद्ध सुरु भएयता अमेरिकाले तीन अर्ब डलर बराबरको सैन्य सहयोग युक्रेनलाई उपलब्ध गराएको छ।युरोपेली देशहरूले पनि युक्रेनलाई शक्तिशाली किसिमका हतियारहरू उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसले युक्रेनमाथि परमाणु अस्त्रबाट आक्रमण गर्ने सम्भावनातर्फ विश्व तयार हुनुपर्ने बताएका छन्।अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सीएनएनसँगको अन्तरवार्तामा जेलेन्स्कीलाई रुसले रणनीतिक परमाणु अस्त्र आक्रमणमा प्रयोग गर्नसक्ने अमेरिकी गुप्तचर निकायका निर्देशकको हालको चिन्ताबारे प्रश्न सोधिएको थियो।
यो युक्रेनको प्रश्न होइन र युक्रेन मात्रैका लागि प्रश्न होइन। यो सम्पूर्ण विश्वका लागि प्रश्न हो भन्ने मलाई लाग्छ।“ उनलाई रुसको प्रतिष्ठित नौसैनिक पानीजहाज मस्कोभा डुबेकोबारे पनि सोधिएको थियो। त्यसमाथि दुईवटा युक्रेनी क्षेप्यास्त्रबाट हमला गरिएको विवरणबारे उनले प्रस्ट बोलेनन्।
उनले भने, “हामीलाई थाह छ अब त्यो अस्तित्वमा छैन। हाम्रो लागि त्यो हाम्रो देशविरुद्ध एउटा बलियो अस्त्र थियो त्यही भएर त्यो डुब्नुमा हामी दुखी छैनौँ।““हामीलाई आक्रमण गरेको रुससँग जति कम अस्त्र हुन्छ, हाम्रो लागि त्यति नै राम्रो हो।“
यसैबीच युक्रेनी प्रहरीले हालै रुसी अतिक्रमणबाट मुक्त भएका किएभको उत्तर–पश्चिममा रहेका नगरहरूबाट ९०० गैरसैनिकका शव फेला परेको जनाएको छ।त्यसमध्ये ३५० बुचा नगरमा मात्रै फेला परेका थिए।
क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख एन्ड्री नेभीटोभले उनीहरूमध्ये लगभग सबैलाई रुसी सैनिकले गोली हानी मारिदिएको बताए। कतिपयलाई सामूहिक रूपमा गाडिएको थियो अरूको शव चोकका विभिन्न ठाउँमा फेला परका थिए।